Goolhaye Caan Ah Oo Ka Qeyliyay Michael Ballack: "Qosolkiisa Ayaaba Ku Cabsi Gelinaya" %
Michael Ballack, wuxuu ahaa mid qosolkiisa uu ku cabsi gelinayo taasoo kuugu dhiiro gelineysa in aadan agaagarkiisa aadan ka dhawaan, sida uu ugu yaraan aaminsan yahay Goolhayihii hore ee Paraguay, Jose Luis Chilavert.
Wuxuu ahaa mid intii uu ku jira jiray mihnada kubada cagta, gooldhaliye aad ufiican, goolhaye, qabashada Laadadka xurta iyo waliba Rigoorooyinka, waana ninka lagu magacaabo Jose Luis Chilavert.
Mid kamid ah, dhacooyinkii loogu xasuusta badnaa ayaa waxay tahay sheekadii layaabka badneed ee ka dhacday koobkii aduunka ee 2002-dii, kaasoo lagu marti-geliyay dalalka Kooriyadda Koonfureed iyo waliba Japan.
“Qosol waliba oo ka timaadda Ballack waxay ahayd mid cabsi leh,” ayuu usheegay Chilavert, Majalada reer Spain ee ESPN
“[Estanislao] Struway ayaa la daba dhigay, wuxuuna ahaa midkoodii ugu fiicnaa dhamaan waqtiyadda oo dhan,” ayuu hadalkiisa ku daray
“Laakiin isaga [Michael Ballack] ma ahan mid aad udhawaan kartid, maxaa yeelay B.O.-giisa ayaa dhab ahaantiiba ah mid cabsi ah,” ayuu sii daba dhigay.
“Ma garan karo, hadii ay tahay istaraatiijiyada uu uga hor-tago ciyaartoyda kasoo horjeeda, laakiin waa inuu isticmaalaa deodorant ama Liin,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, goolhaye Jose Luis Chilavert.